निशान न्युज फाल्गुन २५, 2075
०६९ साल जेठ ८ गते हामीले यही काठमाडौंमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर देश स्वराज आन्दोलनको उद्घोष गरेका थियौं । यो आन्दोलन विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरुको कार्यकालबाट गुज्रियो । उहाँहरुले भने यस शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कदर नै गर्नुभयो । यस आन्दोलनको संवेदनालाई उहाँहरुले पनि कतै बलजफ्ती बलप्रयोग गर्नुभएन ।
त्यसले पनि यो आन्दोलन कुनै पनि चरणमा बिस्फोट हुने डर थियो । यसले नकारात्मक मोड लिने डर थियो । त्यसबाट हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूहरुले पनि जोगाउनुभयो । त्यही भएर माननीय पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूहरु डा. बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल पनि उत्तिकै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ ।
हामीमाथि राज्यद्वारा विभिन्न दमन भएता पनि हामी कहिले पनि प्रतिशोधका भावना आफ्नो मनमा पालेनौं । मेरो खुट्टा भाँचिए पनि, हाम्रा कार्यकर्तामाथि दमन भए पनि त्यसको प्रत्युतरमा फूल आन्दोलन चलायौं । मेरीगोल्ड मुभमेन्ट चलायौं । लाठीचार्ज गर्ने प्रहरीहरुलाई सयपत्री फूल दिन थाल्यौं । गुलाब दिन थाल्यौं र कतै न कतै उहाँहरुको मनमा सद्भाव पलाउन थाल्यो । त्योचाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रुपमा भोगेका छौं, देखेका छौं र त्यही कारणले हाम्रो पनि आन्दोलनमा हिंसा हुन सक्थ्यो ।
हामी अहिंसात्मक भए पनि राज्यबाट दमन हुन सक्थ्यो । तर, प्रहरीबाट कतै पनि गोली चलाउने कार्य भएन । त्यसका लागि राज्य र प्रहरी पनि धन्यवादका पात्र हुन् । हामीले उदाहरणीय रुपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन अगाडि बढायौं । यहाँ निकाससम्म दिने मोडमा आइपुग्यो । त्यसका लागि राज्य, प्रहरी जनता सबै उत्तिकै धन्यवादका पात्र रहेका छन् ।
त्यही भएर आज हामी जुन मोडमा आइपुगेका छौं । त्यसका लागि म आफ्ना समर्थक, तराईका जनतालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । किनकि हिंसात्मक आन्दोलन गर्न सजिलो हुन्छ । मान्छे कुट्न सजिलो छ, ढुंगा फाल्न सजिलो छ । तर, आफैंले पिटाइ खाएर बस्नचाहिँ गाह्रो हुन्छ । तर, हाम्रा कार्यकर्ताहरुले, समर्थकहरुले आफ्नो हात बाँधेर बसे ।
मीमाथि जतिसुकै हिंसा गरे पनि, जतिसुकै दमन गरे पनि हामी हिंसात्मक हुदैनौं भनेर ठोस आस्थाका साथ, ठोस धैर्यका साथ उनीहरुले यो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए र अहिले शान्तिपूर्णरुपमा यो सम्पन्न हुँदैछ, एउटा अवतरण हुँदैछ । यसका लागि हाम्रा कार्यकर्ता उत्तिकै धन्यवादका पात्र छन् । समर्थक उत्तिकै धन्यवादका पात्र छन् ।
योभन्दा अगाडि ४ वर्ष अगाडि डिल्लीबजार कारागार म स्वेच्छाले गएको हुँ । स्वेच्छाले जेल जानु र अहिले जेल जानुमा धेरै नै अन्तर रहेको छ । त्यसै पनि भनिन्छ, जेल एउटा महाविद्यालय हो, ठूलो पाठशाला हो । बाहिर हामीले पढ्न नपाएका कुराहरु बाहिर अनुभूति गर्न नपाएको कुराहरु त्यो जेलमा अध्ययन गर्न सक्छौं जेलमा गएर अनुभूति गर्न सक्छौं ।
नेपाल सधैं स्वतन्त्र भयो होला । स्वतन्त्रतालाई हामी यति ठूलो मान दिन्छौं कि स्वतन्त्रता भनेको के हो ? त्यो हरण भएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा सामान्य मान्छेले अनुभूति गर्न सक्दैन । तर, जेलमा पुगेपछि त्यो स्वतन्त्रता कति महत्वपूर्ण हुने रहेछ । एक दिन भए पनि स्वतन्त्र हुन चाहने रहेछ ।
(राउतले शुक्रबार राष्ट्रिय सभा गृहमा सरकारसँग सम्झौता गरेपछि व्यक्त गरेको भनाई)